Huawei Watch GT 2: nweta kacha na ya na ndị a niile gam akporo ngwa | Androidsis
Huawei Watch GT 2: nweta ihe kacha mma na ya na ngwa gam akporo ndị a niile
Onyeka Onwenu | | Ngwa gam akporo, smartwatch
Smart ese, makwaara dị ka smartwatchHa bụ ngwaọrụ ndị na-enweta nkwado dị ukwuu n'etiti ụdị ndị na-ege ntị niile. Ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ onwe ha, na-enweghị mkpa iji ekwentị mkpanaaka, mbadamba ma ọ bụ PC (kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ).
Otu n'ime smartwatches dị mkpa na mpaghara a bụ Huawei Watch GT 2, elekere nwere oke ahịa na nke nwere ike ịdị ndụ na-enweghị mkpa smartphones. Ekele maka ikike ya, ọ nwere ike iji ngwa, ọtụtụ n'ime ha mara site na njedebe nke akara Asia.
Ngwa maka Huawei Watch GT 2 sitere na ụlọ ahịa Android, n'ihi nke a, ị ga-ama onwe gị ngwa ngwa mgbe ị na-etinye ha. Watch GT 2 site n'inwe ngwa ndị a niile ga-adịwanye mma, na-enye ndị ọrụ ohere dị ukwuu maka ekele maka ngwanro ahụ.
1 Huawei eyi
2 Maapụ HuawWatch
4 Yiri OS Smartwatch
5 Navigator maka Huawei Band 2, 3 na 4
6 Ihu nche fotoWear Classic
7 ihu - akwụkwọ ahụ aja
8 Akụkụ ihu
Ọ bụ ngwa na-enweghị ike ịgbaghara ma ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ sitere na Huawei na-emepụta Asia. Ọ bụ ngwá ọrụ na-enye ozi niile nke egwuregwu ahụ na ị na-eme kwa ụbọchị, na-enwe ihe niile na mkpịsị aka ya, dị mkpa data dị ka kwa ụbọchị nzọụkwụ, calories ọkụ na anya njem.
Ewezuga ozi egwuregwu, Huawei Wear na-enye ohere ịkekọrịta data na Huawei Health (nke a maara dị ka Huawei Health), ọkwa batrị na Bluetooth. Nkọwa nke mmega ahụ dị mkpa, ma ewezuga nke a ọ na-enyekarị ozi gbasara elekere (smartwatch) na wearables (mgbaaka egwuregwu).
N'ihi Huawei Wear ị nwere ike ijikwa ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na ngwa ahụ, nwee ihe karịrị otu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta mgbe niile. Huawei Wear bụ ezigbo ngwaọrụ iji nweta ihe niile n'okpuru njikwa ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ smartwatch sitere n'aka onye nrụpụta ma ọ bụ site na band smart egwuregwu. Enwere ike ịwụnye ya ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụghị ngwa gọọmentị, mana ọ bara ezigbo uru maka ndị ọrụ chọrọ ịnwe ihe nchọgharị na nkwojiaka ha ma jiri ọrụ ya kacha baa uru. N'ime njirimara ya, Maapụ HuawWatch na-enye gị ohere izipu ọkwa na elekere Watch GT 2 ịmata ụzọ ma ọ bụ ịmata ebe ebe a na-aga.
Ọ dị mkpa ịnwe ngwa Google Maps na ekwentị Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọrụ a, usoro ngwa ngwa ịnweta ya bụ iji GSpace (ngwa nwere ọrụ Google). Google Maps bụ ọrụ ngwá ọrụ a ga-eji rụọ ọrụ 100%.
Ọ na-egosi ozi nke ebe dị anya iji ruo ebe a na-aga, oge a na-eme atụmatụ ịbịarute na ụfọdụ ozi ndị ọzọ. Maapụ HuawWatch nwere akara nke 3,5 n'ime kpakpando ise na ọ dị mma ịnwe nkọwa ndị dị mkpa na ihu nche. Mmelite ikpeazụ ọ nwere sitere na afọ gara aga.
Ọ bụ otu n'ime ngwaahịa kpakpando nke Huawei, n'ihi na a na-arụ ọtụtụ ọrụ na ya tupu ewepụta ya na ngwaọrụ mkpanaka nke ika ahụ. Ọ na-egosi mmekọrịta ọ bụla na egwuregwu ị na-eme kwa ụbọchị, na-agụta usoro kwa ụbọchị, ogologo njem na kilomita na calorie. Ebumnuche bụ iru nzọụkwụ 10.000 kwa ụbọchị.
Huawei Health bụ otu ngwa maka ijikwa ihe niile metụtara mgbatị ahụ site na Huawei Watch GT 2, elekere a ma ama nke sitere na onye nrụpụta. Site na ya ị nwere ike ịgbanwe ihu elekere, hazie ọkwa, tinye mkpu ma mara data egwuregwu niile kwa ụbọchị.
Ọ na-arụkọ ọrụ ọnụ na Huawei Wear, n'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ a zuru okè ngwá ọrụ mara ma ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ngwa ga-akara gị na mobile ngwaọrụ. Huawei Health bụ ngwa ị nweghị ike ịgbaghara, ọkachasị ma ọ bụrụ na etinyere ya na ekwentị gị (ọ na-abịakarị etinyere ya).
Yiri OS Smartwatch
Google enweghị ike ịpụ na ndepụta ahụ, karịsịa maka inwe ngwa na-adọrọ mmasị a na-akpọ Smartwatch Wear OS, nke a na-akpọbu Android Wear. Ekele maka Smartwatch Wear Os, imekọrịta n'etiti Huawei Watch GT 2 na ngwaọrụ mkpanaka ga-abụ ọrụ dị mfe.
Site na Smartwatch Wear OS ị nwere ike nweta ọkwa, Dekọọ mmega ahụ niile, nwee ike ịgụ ozi enwetara na ekwentị yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị na-adị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere Huawei Watch GT 2, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe kachasị na ya.
Dị ka ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nke Swartwatch Wear OS sitere na Google na-enwe ike ịlele oge nke njem ọ bụla ị na-eme, mara mgbe iwu ga-abata na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Njikwa ahụike na mgbatị ahụ bụ ụfọdụ ihe ị nwere ike ịga na-enyocha ekele ya.
Yiri OS site Google smartwatch
Navigator maka Huawei Band 2, 3 na 4
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta otu isi ihe, ọ kacha mma ịnwe ihe nchọgharị ziri ezi. Navigator maka Huawei bụ otu n'ime ihe ziri ezi, ebe ọ dabere na Google Maps Ọ dịkwa mma ịnwe ya dị ka ngwa ndị ọzọ dị na Huawei Watch GT 2, na-arụkwa ọrụ na ụdị Watch GT, Band 3, Band 4 na Band 4 Pro.
Na-enye gị ohere ịgbakọ ụzọ n'ụzọ dị mfe, na-egosi ọkwa na nkọwa ndị ọzọ ị ga-ahụ na ihuenyo nke smart smart. Obere ibu ya na-eme ka ọ dị ọkụ mgbe etinyere ya na ngwaọrụ dị iche iche. Emelitere ya kpọmkwem na Disemba 24 nke afọ a yana mmezi ọhụrụ.
Navigator maka Huawei Band 2, 3, 4, 5 na elekere
Ihu nche fotoWear Classic
Nhazi onwe na Huawei Watch GT 2 na-aga site n'inwe ngwa dị mfe na karịa ihe niile ọ bara uru mgbe niile. PhotoWear Classic Watch Face na-enye nhọrọ itinye foto na akwụkwọ ahụaja, na-enye ohere ka emegharịa ihe onyonyo a ma hazie ya ka egosipụta ya nke ọma na elekere.
N'ime nhọrọ gị, PhotoWear Classic Watch Face na-enye nhọrọ ịhazi nhọrọ ndị ọzọgụnyere imewe ọkpụkpọ, oge ihuenyo, na ntọala ndị ọzọ. Site na ngwa a ị nwere nhọrọ nke inwe onyonyo dị mkpa a na-ahụ anya na Huawei Watch GT 2.
Ngwa ahụ na-enye ohere ka ị gbanwee ihe onyonyo 9 mgbe ọ bụla ịchọrọ, nke a ga-eme ka o kwe omume iji otu n'ime ha kwa ụbọchị n'izu. Enwere ụdị Pro nwere ọtụtụ nkwalite, ewezuga ịgbakwunye ọtụtụ nhọrọ mgbakwunye na onye ọrụ njedebe zụrụ ụdị a maara dị ka PhotoWear Classic Pro.
ihu - akwụkwọ ahụ aja
Ịchọ ebe dị iche kwa ụbọchị bụ ngwa ị na-achọ na Play Store. Facer bụ ngwa eji ahazi ụdị ọ bụla maka smartwatches, gụnyere Huawei Watch GT 2, ụdị nke nwere ngwa dị iche iche na Ụlọ Ahịa Google Play.
Site na ngwa Fazer ị nwere ike hazie ọkpụkpọ ahụ kpamkpam, na-agụnye na nchekwa data ya gbasara 100.000 spheres, nke na-eto eto ka oge na-aga. Ọ nwere akụkụ nke ụdị ụdị adịchaghị mma, dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata onwe gị na ndị ọzọ, ewezuga inwe ike ịtọ oge mgbanwe nke onye ọ bụla.
Nhazi nke ngalaba dị mkpa karịa ka ị chere, ebe ọ ga-enye ya mmetụ ọhụrụ naanị site n'itinye ihe oyiyi. Huawfaces dakọtara na Huawei Watch GT 2 na ụdị abụọ (42mm na 46mm), kamakwa na ụdị Huawei Watch GT 2E, otu n'ime ụdị ndị nrụpụta wepụtara.
Ihu elekere ga-adị iche na nke ụlọ ahịa Huawei na-enye, yabụ na ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe obere skins maka elekere smart gị. Ọ bụ ngwa nke na-enweta akara ọma ya n'ihi na a na-emelite ya kwa oge.
Nkwado ọtụtụ asụsụ gụnyere ndị a: Spanish, German, Russian, Italian, Portuguese, English na Vietnamese. Na-enye nhọrọ nke bulite spheres n'onwe ha iji ha dị ka a ga-asị na ọ bụ ngwa gara aga, ka ị nwee ike inwe nke gị n'ejighị ndị na-abịa ọkọlọtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Huawei Watch GT 2: nweta ihe kacha mma na ya na ngwa gam akporo ndị a niile
Otu esi edozi vidiyo YouTube na ndetu egwu egwu
Simulators 5 kacha mma maka gam akporo